संघ र उद्योग वाणिज्य संघबीच पुलको काम (किसन सुनार)– महासचिव पदका उम्मेदवार -
पोखरा महानगरपालिका आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम-(पूर्ण पाठ सहित)
विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ३/ समिट एयरमा रहेका अन्य यात्रु भने सकुशल
सटर पेटीको व्यापार बन्द गर्न, फोहरको सही व्यवस्थापन र दिनभर सडकमा गाडी पार्किङ नगर्न पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको आग्रह
पुम्दी भुम्दी मा दुर्घटना ,१को मृत्यु !
निर्मला पन्तको दोषीलाई‘एक साताभित्र कारवाही’ – गृहमन्त्री
नेकपा गण्डकीका जिल्लामा पार्टी संयन्त्र
संघ र उद्योग वाणिज्य संघबीच पुलको काम (किसन सुनार)– महासचिव पदका उम्मेदवार
अर्थ बाणिज्यपेशा व्यवसाय
By Pokhara Hotline	 Last updated Sep 14, 2018
निर्वाचनको लागि घरदैलोमा हुनुहुन्छ । के कस्तो अवस्था बुझिरहनुभएको छ ?
उत्तर ः धेरै मतदाताको धेरै अपेक्षाहरु छन् । पछिल्लो दुई वर्ष व्यवसायी र उद्योग वाणिज्य संघको बीचमा दुरी बढेको पाईयो । घरदैलोका क्रममा उठेका समस्या भनेका घरभाडाका समस्या, ट्राफिकका समस्या हुन् । त्यस्तै पछिल्लो समयमा अहिले करको बारेमा पनि धेरै कुराहरु उठेका छन् । सामान्य व्यवसायी देखि ठुला व्यापारीसम्मकमा फरक फरक प्रकृतिका फरक फरक समस्या छन् । ती फरक फरक समस्यालाई पहिचान गरेर उद्योग वाणिज्य संघले गर्न सक्ने यहिँ समाधान गर्ने र कतिपय नीतिगत कुराहरु छन्, जुन स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मतदाताहरुले हामीलाई जोश भर्नुभएको छ, उहाँहरुका कारणले अझै बढी जिम्मेवारी बोध भएको छ ।
के छ त मतदाताको प्रतिक्रिया ?
उत्तर ः युवा व्यवसायीको टीम आएको छ । तपाईंहरुमा नयाँ जोश र जाँगर देखिन्छ । अब हाम्रो टीमले केही गर्छ की भन्ने आशा गरेको पायौं ।
यहाँले शुरुमै उल्लेख गर्नुभो की, उद्योग वाणिज्य संघ र व्यवसायीबीच दुरी बढ्यो । कुन कुरामा रहेछ खासमा दुरी बढेको ? उत्तर ः पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ सामाजिक रुपमा पोखराको जेठो सँस्था भयो । हिजो यसले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई जसरी बहन गरेर समाजमा एउटा सकारात्मक परिवर्तनमा जुन भुमिका खेल्यो । स्थानीय सरकार नबने बेलासम्म सरकारकै जस्तै काम गरेको हो । अब स्थानीय सरकार आईसकेको अवस्थामा अब उद्योग वाणिज्य संघका गतिबिधिहरु फरक शैलीबाट व्यवसायीका गुनासाहरुलाई पनि सम्बोधन गर्न बढी समय दिनुपर्ने देखियो । अबको पाली भनेर विकासका लागि सरकारलाई खबरदारी, सहकार्य र व्यवसायीसँगै रहनुपर्ने अवस्था आयो ।
अग्रजहरुले त पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको आकर्षण घट्यो भन्ने गुनासो गरेका छन् नी ?
उत्तर ः पहिलो कुरा त एउटा संस्थालाई आकर्षक बनाउने कुनै व्यक्ति विषेशले होईन । त्यसमा सबै पदाधिकारीको जिम्मेवारी रहन्छ । संस्था भनेको आँफैमा एउटा गरिमामय ठाउँ हो, त्यसलाई कस्तो बनाउने भन्ने पदाधिकारीको जिम्मेवारी हो । मैले जोड्न खोजेको एउटा कुरा हो भने, हिजो पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु पनि गथ्र्यो । जस्तो की पृथ्वीनारायण क्याम्पस, बालमन्दिरको स्थापना, पोखरा विश्वविद्यालयमा खेलेको भुमिका तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खेलेको भुमिकाका लागि यसको चार्मिङ थियो ।
तर अहिले परिस्थिति फरक छ । अहिले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले पहिले गरेका भन्दा पनि अहिले व्यवसायीकै हितमा अल्लि बढी जोड दिनुपर्छ की जस्तो लाग्छ । अहिले तीन तहको सरकार छ । सरकार आँफैमा प्रयोगको अवस्थामा छ । थुप्रै नीति तथा नियमहरु बन्ने क्रममा छन् । ती कुराहरु बुझ्नु जरुरी छ । त्यो बुझेपछि व्यवसायीलाइ बुझाउनुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छन् । कानूनहरु त आउलान् । तर ती कानूनहरु व्यवसायी मैत्री छन् की छ्र्रैनन भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । अबको पाटोमा सकारसँग हातेमालो गर्ने र खबरदारी गर्ने हो । व्यवसायीलाई कसरी स्थापित गराउने भन्ने ।
करको दर भन्दा दाउरा बढाउने भनेर व्यवसायीहरु भनेको भन्यै गर्छन् । तर त्यो दायरा कतिसम्म फराकिलो पार्ने भन्ने सन्दर्भमा मौन बसेको देखियो । वा सिधा साधी कर छलेका कम्पनीहरुबारे त मौन जस्तो देखियो नी ?
उत्तर ः सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति अन्तरगत जाने त भन्यो, सम्बृद्ध नेपाली सुखी नेपाली त भन्यो । तर यि सबैकुराहरु कागजमा मात्रै सिमित भए । सरकार व्यवसायीसँग संगै रहेर भोलीको दिनमा व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउनको निम्ति सरकारको पनि पहल आवश्यक छ । राज्यले कर पाए न सम्बृद्ध हुने न हो । अहिलेको तथ्याँक हेर्दा पोखरा महानगरपालिकामा २० हजार मात्रै दर्ता छन् । तर हाम्रो अनुमान के हो भने पोखरामा मात्रै ४० हजार भन्दा बढी व्यवसायी छन् । ती सबैलाई करको दायरामा ल्याउने हो नी । राज्यलाई घाटा बनाएर व्यवसायीले मात्रै कमाउनुपर्छ भन्ने होईन । मात्रै सरकारलाई के आव्हान गर्न चाहन्छौं भने व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउनुस ।
पोखराकै सन्दर्भमा भन्दा घरभाडाको समस्या एकदमै जल्दोबल्दो रुपमा आएको छ । यस्तो समस्यालाई समाधान गर्ने तपाईंहरुसँग के छ कार्यक्रम ?
उत्तर ः यो विषय उद्योग वाणिज्य संघले मात्रै पोलिसि बनाएर यसो गर्नुस भनेर हुँदैछ । अहिले सरकारले यसबारेमा कानून बनाउँदै छ । यो कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि सबै समस्या समाधान हुने कुरा हो । यसलाई नीतिगत रुपमा टुँग्याउनुपर्छ भन्ने हो । यस्तो नीति भएमा तीन पक्षलाईनै फाईदा हुने हो । घरबेटी, व्यवसायी अनि सरकार ।
फेरी निर्वाचनको सन्दर्भमै कुरा गरौं । अहिलेको निर्वाचन राजनीतिक शक्ति हावी भयो भन्ने कुरा आयो नी ?
उत्तर ः निर्वाचन आउँने बेला विभिन्न खालेर हल्लाखल्ला हुने गर्छन । राजनीतिमा आस्था राख्ने हिजो पनि थिए । आज पनि छन् र भोली पनि हुनेछन् । राजनीतिक दलको स्वभाविक धर्म के हो भने, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आफ्ना विचारधाराका मानिस आउन । तर पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा आईसकेपछि हाम्रो एउटै पार्टी हो–त्यो हो सँस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ । चुनावलाई चुनावकै रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
उत्तर ः पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई प्रबिधियुक्त बनाउने, व्यवसायी र संघको बीचमा पुलको काम गर्ने योजना छ । हिजो जसरी पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले सामाजिक उत्तरदायित्वमा हात हाल्यो त्यसलाई निरन्तरता दिने । अन्य कामका क्षेत्रहरु पत्ता लगाएर नयाँ कामहरु पनि गर्दै जाने हो । मुलत ः पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई प्रबिधिमैत्री बनाउने र युवा व्यवसायीलाई प्रेरणा दिने हो ।
Pokhara Hotline 1666 posts0comments
सप्त ऋषिको पूजा आराधना गरी ऋषिपञ्चमी मनाउँदै
आर्थिक सम्बृद्धिका लागि उत्पादन– (अर्जुन पोखरेल) महासचिव पदका उम्मेदवार
जनप्रियमा गुरु पुर्णिमा विशेष कार्यक्रम।
फिस्टेल बचत तथा ऋण सहकारीको प्रारम्भिक साधारण सभा सम्पन्न
एउटा रहस्यमय पत्र
हावापानी बाट पीडित ४ घरमा अनेरास्ववियुको सहयोग
स्टेप बाई स्टेप मा. बि. मा चित्रकला प्रतियोगिता
फेदीखोलाको खहरे ‘नमुना कागती गाउँ’